भागरथी हत्या प्रकरण : कक्षा ११ मा पढ्ने विद्यार्थी पक्राउ | रेडियो झापा 100.7 MHz.
रेडियो झापा 100.7 MHz. बुधबार, फाल्गुण ०५, २०७७ ६:२२:१२
काठमाडौं । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ की १७ वर्षीया भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छ्न् ।
उनको बलात्कारपछि हत्या भएको खुलेको थियो ।
प्रकाउ परेका युवक सोही विद्यालयमा ११ कक्षामा अध्ययनरत थिए । उनी भट्ट थरकै भएको बताइएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनी भागरथीका आफन्त रहेको खुलेको छ । उनले हत्या स्वीकार गरिसकेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
घटना २१ गते दिउँसो २:४० देखि २ बजेर ४७ मिनेट्को दुरीमा भएको बताइएको छ ।
अनुसन्धानमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश प्रहरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीको विशेष टोली खटिएको छ ।
पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट भागरथीको बलात्कारपछि हत्या भएको खुलेको हो । उनको घाँटी थिचेर हत्या गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
प्रहरीले भागरथीले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइललगायत अन्य केही सामग्रीको फरेन्सिक ल्याबबाट अनुसन्धान गरेको थियो ।
प्रहरीले पछिल्ला दिनहरुमा भागरथीका साथीलगायतका अन्य शंकास्पदहरुसँग सोधपुछ गर्दै आएको थियो ।
घटनास्थलमा भागरथीको मोबाइल भेटिनुलाई प्रहरीले अनुसन्धानमा सघाउ पुग्ने सकारात्मक संकेत मानेको थियो ।
प्रहरीले कल डिटेल, भागरथीको फेसबुकलगायतको पनि अनुसन्धान अघि बढाएको बताएको थियो ।
प्रहरीले शंकास्पदहरुको ‘क्लोज रिङ’ बनाएर अनुसन्धान अघि बढाएको बताउँदै आएको थियो । विभिन्न तथ्य र सूचनाका आधारमा शंकास्पदहरुको ‘क्लोज रिङ’ बनाएको हो । घटनामा नजिककै व्यक्तिको संलग्नता हुनसक्ने प्रहरीले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो ।
प्रहरीका अनुसार उनले भागरथीलाई धकेलेर लगेका थिए ।
उनले बयानका क्रममा धेरैदिनदेखि आफुले भागरथीविरुद्द योजना बनाएको बताएका छ्न । उनीहरुबीचमा केही पारिवारिक विवादसमेत भएको हुनसक्ने सम्भावना देखिएको प्रहरी बताउँछ । सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रहरीका डीआईजी उत्तमराज सुवेदीले एकजना प्रकाउ परेको पुष्टि गर्दै उनलाई आज सार्वजनिक गर्ने बताए ।